सलाम धुर्मुुस सुन्तली ! धिक्कार छ, यी मधेशी नेताहरुलाई – Complete Nepali News Portal
हरेकको मनलाई तरङ्गित पार्दै के भने प्रेम वानियांले सिड्नीमा ! भिडियो हरु सहित !
सन्दिप लामिछाने बने ड्रिम ब्वाई (भिडियो सहित)
करोडपति यी बक्तिको बास कसरी भयो सडकमा !यी ट्याक्सी चालकको कहानी अचम्मकै (हेर्नुहोस)
कुवैतमा पत्रकारमाथी हमला झन्डै ज्यान गयो (भिडियो र विस्तृत जानकारी सहित)
दर्शकको भिडमा स्वेताले गरिन अचम्मै !किन आफुलाई एति सम्म कमजोर मानिन?(हेर्नुहोस)
सावधान !जोगिएर हिड्नुहोस् काठमाण्डौको यी गल्लीहरुमा !कुनैपनि समय तपाईलाई यी घरले पुर्न सक्छ (हेर्नुहोस भिडियोनै)
ज्योती र भागिरथको उत्ताउलो दोहोरी १८ बर्ष भन्दा सानाले सुन्नै अप्ठ्यारो (भिडियो सहित)
गीत गाउन गएकी अहिले निकै भाइरल गायिका पुर्णिमा लामा आमालाई सम्झदै स्टुडियोमै भक्कानिन थालेपछि (हेर्नुहोस)
कुलेन्द्र बि क र बिष्णु माझी को आवाजमा आखा रसाउने गीत(भिडियो)
सलाम धुर्मुुस सुन्तली ! धिक्कार छ, यी मधेशी नेताहरुलाई
December 28, 2016	8,032 Views
९ पुस, काठमाडौं ।
राजनीति भनेको देश र जनताको सेवा हो अर्थात् भनौं समाज सेवा हो । तर नेपालका राजनीतिक दलका कोही पनि नेताहरु समाज सेवा भन्दा आफ्नै स्वार्थका लागि लडिरहेका छन् । बरु जनता भोकै मरुन्, भोकै सुतुन तर नेपालका राजनीतिक नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र परवाह छैन ।
बरु समाज सेवा त कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले पो गरेका छन् । धुर्मुस सुन्तलीले सिन्धुपाल्चोकको गिरान चौरमा भुकम्प पीडित परिवारका लागि बस्ने घर बनाईदिएर ठूलो गुन लगाएका थिए । गत कात्र्तिकमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले बनाएको एकीकृत नमुना बस्तीको उद्घाटन भएको डेढ महिनापछि धुर्मुस सुन्तलीले महोत्तरी बर्दिबासमा बस्ने अति गरिब विपन्न मुसहर समुदायका परिवारका लागि घर बनाईदिने भएका छन् ।
धुर्मुस सुन्तलीले ५० घर रहेको मुसहर बस्तीलाई नयाँ वर्षको उपहार स्वरुप घर प्रदान गर्न लागेका छन् । तर यति पनि हुति छैन मधेशी नेताहरुलाई । मधेशको नाममा राजनीति गर्ने मधेशी नेताहरुले अहिले सम्म आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै राजनीतिलाई कमाउ खाने भाँडो बनाए । तर मधेशमै बस्ने जनताका लागि भने खासै केही गरेनन् । महोत्तरी जिल्लाबाट राजनीति गरेका र सभासद् भएका सभासद्हरुले अहिलेसम्म एउटा सिन्को पनि भाँच्ने काम गरेका छैनन् । बरु त्यही जिल्लामा धुर्मुस सुन्तलीले नमुना घर बनाईदिने भएका छन् । यति जाबो काम गर्नपनि सकेनन् त्यहाँका नेता र सभासद्हरुले ।
अहिले तराईमा शीतलहरको समस्याले निकै समस्या पार्ने गर्दछ । महोत्तरीका मुसहर समुदायका व्यक्ति अब जाडोमा कठ्याँग्रिएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन लागेको छ । मधेशी नेता र सभासद्हरुले आजका दिन सम्म गर्न नसकेको जुन महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्दैछन् धुर्मुस सुन्तलीले ।
महोत्तरी जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फबाट माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, कांग्रेसकी किरणकुमारी यादव, रामदयाल मण्डल, चन्देश्वर झा, दीपनारायण साह र सीताराम भण्डारी गरी ६ जना चुनिएका छन् भने समानुपातिकतर्फ निर्जला राउत, धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, निशाकुमारी साह, रञ्जना श्रेष्ठ, लालेन्द्रकुमार मण्डल, विजयकुमार सिंह, शिवजी यादव, सुशीलकुमार श्रेष्ठ र सङ्गीता मण्डल धानुक सभासद् भएका छन् । महोत्तरी जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १५ जना सभासद्हरु संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर यी सभासद्हरुले अहिले सम्म केही काम गर्न पनि सकेका छैनन् । १५ जना सभासद्ले गर्न नसकेको काम धुर्मुस सुन्तलीले गर्न लागेपछि यिनीहरुलाई लाज पनि छैन ।
सरकारले महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्ग, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा समुदाय तथा विपन्नवर्गको उत्थान र विकास गर्न भन्दै हरेक सभासद्लाई वार्षिक रुपमा १० लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यस्तै अरु विकास निर्माणको काममा सरकारले छुट्टै बजेट छुट्याउँछ । तर मुसहर बस्तीका लागि भने महोत्तरीका कुनैपनि सभासद्ले आजका दिनसम्म पनि केही काम नै गर्न सकेका छैनन् ।
यसअघि धुर्मुस सुन्तलीले पाँच करोड १४ लाख ३९ हजार १८७ को लागतमा सिन्धुपाल्चोक गिरानचौरका भुकम्प पीडित परिवारका लागि ६५ घर बनाईदिएका थिए । सिन्धुपाल्चोक गिरानचौरमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्दा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनमा बचेको एक करोड तीन लाख ६६ हजार रुपैंया महोत्तरीको बर्दिबासमा मुसहर बस्तीका परिवारको घर बनाउन खर्च गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । मुसहर बस्तीमा छाप्रोका ५० घर रहेका छन् । त्यो घर बनाउन कूल चार करोड ७८ लाख रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
“मधेशमा यति धेरै नेताहरु छन् तर कसैले हाम्रो लागि केही गरेनन् । कतिखेर घरको छानो खसेर मरिएला भन्ने डर सधैं हुन्थ्यो तर अब नयाँ घर बन्ने भयो । अहिले मुसहर बस्तीमा कसैले नसोचेको काम हुन लागेकोमा निकै दंग छन्, मुसहर समुदायका जनता ।”
छाप्रोको घरबाट नयाँ घर बन्ने भएपछि मुसहर बस्तीमा अहिले खुसीयाली छाएको छ । पुसको जाडोमा परालको गुन्द्री ओढेर रात बिताउनुपर्ने मुसहर बस्तीका जनताको मुहारमा यतिखेर खुसियाली छाएको हो । जाडोमा आगो ताप्दै रात बिताउनुपर्ने अवस्था अझै रहेको बताउँदै मुसहर बस्तीका मिश्रीलाल सदा भन्छन्, “घर बन्ने खबर सुन्दा निकै खुसी लागेको छ । मधेशमा यति धेरै नेताहरु छन् तर कसैले हाम्रो लागि केही गरेनन् । कतिखेर घरको छानो खसेर मरिएला भन्ने डर सधैं हुन्थ्यो तर अब नयाँ घर बन्ने भयो । निकै खुसी छु ।” अहिले मुसहर बस्तीमा कसैले नसोचेको काम हुन लागेकोमा निकै दंग छन्, मुसहर समुदायका जनता ।
गत वर्ष मात्रै धुर्मुस सुन्तली मुसहर बस्ती छिरेका थिए । मुसहर बस्तीको बिजोग देखेर उनीहरुले बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । मानवता र सद्भावका लागि सहकार्य गरेर मुसहर बस्ती निर्माण गर्न धुर्मुस सुन्तलीले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । – tvannapurna.com
March 3, 2017	188,186
April 28, 2017	115,487
February 26, 2017	113,666
January 9, 2017	112,581
April 26, 2017	104,492
March 24, 2017	103,858
March 21, 2017	103,406
April 19, 2017	96,236
January 24, 2017	94,030
April 17, 2017	90,175